နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ်ခလုတ် > Wall Switch
ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း Smart Wall Switch သည် Neutral Wire Smart Life Tuya 1/2/3Gang3Way
China စျေးသက်သာသော Wireless Remote Smart Wall Switches Quotation
8 String Waterproof Solar PV DC Combiner Box ၏ ရှင်းလင်းချက်
Wireless Remote Smart Wall Switches RF433+WiFi Wireless Remote Control Single Live Wire Design နှင့် Neutral Wire မလိုအပ်ပါ။ ဤဒီဇိုင်းအသစ် ဖန်ဘောင်ကြိုးမဲ့ ထိတွေ့စမတ်ခလုတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သမားရိုးကျ ခလုတ်များကို အစားထိုးရန်အတွက် WiFi+RF ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ယခု တစ်ခု အခြားသော စမတ်ခလုတ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများစွာ ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် စမတ်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို Smart Life/Tuya အက်ပ်တွင် ထည့်သွင်းထားပြီး နောက်ခံမီးအဖွင့်/အပိတ်နှင့် ထပ်ဆင့်လွှင့်မှုအခြေအနေတို့နှင့်အတူ ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသော မှန်အကန့်သည် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြင့် မတူညီသောအလှဆင်စတိုင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ Alexa Google Home နှင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ သင့်မီးများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို အာမခံသည်၊ သင့်စမတ်ကျသောဘဝကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပျော်ရွှင်မှုများစွာပေးသည်။
Wireless Remote Smart Wall Switches အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1.No neutral wire မလိုအပ်ပါ။ သင့်လက်ရှိဝါယာကြိုးကို တစ်ခုတည်းသော ဝိုင်ယာကြိုးဒီဇိုင်းဖြင့် ပြန်လည်ပတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ခလုတ်များစွာဖြင့် အလင်းတစ်ခုအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် App ရှိ အခြားသော WiFi စမတ်ခလုတ်များသို့ ဤခလုတ်၏ 3-Way ထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် အိုင်ဒီယာအသစ်တစ်ခု၊ ထူးခြားသော tempered glass panel သည် မတူညီသည့်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ အလှဆင်စတိုင်များနှင့် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မှန်ဘောင်အမျိုးအစားများသည် မည်သည့်နံရံဒီဇိုင်းနှင့်မဆို ရောစပ်ရန် အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပေးပါသည်။(သတိပြုရန်- 1.ပက်ကေ့ဂျ်တွင်ပါရှိသော ပုံမှန်အလုပ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။2 ဤခလုတ်ကို ဘက်စုံထိန်းချုပ်နိုင်သည် မတူညီသော switches အများအပြား၊ သို့သော် switch တစ်ခုတည်းတွင်ဂိုဏ်းတစ်ခုတည်းသာဆက်စပ်နိုင်သည်။)
2. သမားရိုးကျ ဘုံခလုတ်မှ အင်္ဂါရပ်များ ကွဲပြားသည်၊ ဤစမတ်ခလုတ်သည် အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု၊ အသံထိန်းချုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် RF433 ကြိမ်နှုန်းကဲ့သို့သော အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြင့် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည် ကုဒ်နံပါတ် 1527 ပါသော ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကို အခြားစမတ်ခလုတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုများစွာကို ရယူလိုက်ပါ။(မှတ်ချက်- 433 RF အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပက်ကေ့ဂျ်တွင် မပါဝင်ပါ၊ သီးခြားဝယ်ယူပါ။)
3. ပါဝါပိတ်ချိန်နှင့် နောက်ခံမီးခလုတ်ဆက်တင်များတွင် နောက်ဆုံးအခြေအနေအား မှတ်သားထားသကဲ့သို့ ON/OFF relay status ကဲ့သို့ အဆင့်မြှင့်ထားသော Smart Life Tuya အက်ပ်တွင် အင်္ဂါရပ်အသစ်များကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ Alexa နှင့် Google home တို့နှင့်အတူ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အသံဖြင့် သင့်ချိတ်ဆက်ထားသော စက်များကို အသံဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။ Smart Life/Tuya App မှတစ်ဆင့် သင့်စမတ်ဖုန်းရှိ စက်ပစ္စည်းများကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ပါ။
4. အက်ပ်ဖြင့် အချိန်မီများ၊ အချိန်ဇယားများနှင့် နှစ်သစ် (1/5/30 မိနစ်၊ 1 နာရီ စသည်ဖြင့်) ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ပါ။ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို မျှဝေပါ။
5. ကြားနေဝါယာကြိုးမလိုအပ်ဘဲ 1 လမ်းပတ်လမ်းအတွက်သာ; 2.4G ကွန်ရက်ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်၊ စက်ပစ္စည်းကို WiFi နှင့် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပေါင်းထည့်ရန်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူသော တွဲချိတ်မုဒ်တစ်ခု၊ အပြည့်အဝကျေနပ်မှုအတွက်2နှစ်အာမခံနှင့် ရက် 60 ပြန်အမ်းငွေ အာမခံတို့ ပါဝင်ပါသည်။
Wireless Remote Smart Wall Switches အတွက် အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ
အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား: 110V/220V AC (အမိန့်မချမီ ဗို့အားကို အတည်ပြုပါ။)
Load Power: 3-300W/gang (မှတ်ချက်- LED သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ချွေတာသော မီးသီးအတွက် အသုံးပြုပါက ပါဝါဝန်အား 100W ထက်နည်းသင့်သည်)
RF ကြိမ်နှုန်း- 433MHz။
အရောင်: အဖြူ၊ အနက်၊ ရွှေ
2020 အသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းကို ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အမှတ်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်ထားသည်။
Update1: ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် Multi-ထိန်းချုပ်မှု
အပ်ဒိတ် ၃- နောက်ခံမီးဖွင့်/ပိတ် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်
အပ်ဒိတ် 4- ပါဝါပိတ်သည့်အခါ Relay အခြေအနေကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
hot Tags:: ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း စမတ်နံရံခလုတ်များ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်
American Standard Electric Wall Switch
Eu Wifi Smart Touch Wall Switch
Copper Wall Light Switch
UK Metal Electrical Wall Socket Outlet
ရေစိုခံ Touch Glass Wall Switch